musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Iwo Seychelles Islands: Yako Yekushanda Utopia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • misangano • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Sezvo basa-hupenyu hwachinja zvekare, nyanzvi uye maadhijitadhi emadhijitari izvozvi vane mukana wekubatanidza basa uye zororo muzvitsuwa zveSeychelles, imba yako muparadhiso. Kutsika kubva pachiedza chemwenje chemascreen ako uye kusarudza kubva muhofisi yemazuva ese uye mapatani emabasa akasanganiswa muchiedza chezuva chepristine paradhiso ingangodzora spark yawanga uchitsvaga.
Chimiro chitsva chiri kuita Seychelles nzvimbo yekuenda inogadzira nzvimbo yakakosha yekumutsiridza uye kushanda.
Nzvimbo yazvino uye yakachengeteka, zviwi zvinopa nharaunda yakakodzera yebasa rinoshanda.
Fungidzira uchishanda munzvimbo ine runyararo yakavharika mabhishi uye dzinopisa masango anonaya chete tsoka.
Kwemakumi emakore, Indian Ocean archipelago yakanyengedza vafambi kuenda kumahombekombe ayo ane jecha, ichiwana zviwi zveSeychelles mukurumbira wekuva imwe yenzvimbo dzinonyanya kudiwa pasi pano. Iine nzvimbo yayo yakakwana, isina kunaka runako uye inobata mamwe emahombekombe anozivikanwa pasi rese, chiyero chitsva chakawedzerwa izvozvi zvichiita kuti Seychelles ive nzvimbo inogadzira nzvimbo yakakosha yekumutsiridza nekushanda!
Chokwadi, Rimwe Nyika, Seychelles Inozvirumbidza tsika ine vanhu vanotaura mitauro mitatu apo vashanyi vanogamuchirwa nemutsa unodziya weva creole uye vanobatana nesimba muhupenyu hwechitsuwa. Nzvimbo yemazuva ano uye yakachengeteka, zvitsuwa zvinopa nharaunda yakakodzera yebasa rinoshanda pamwe nerunyararo, mahombekombe akavharika uye masango anonaya mvura anongotsika tsoka.
Batanidzazve neako wekuzvisarudzira uye naamai Hunhu. Hazvina kumboitika kare kufunga nezvekuti ungashandise kupi mwaka unotevera wechando, uye nemamiriro ekunze akanaka anodziya akagoneswa kwegore rese, Seychelles inzvimbo yakanaka yekutiza maguta akabatikana uye kutonhora kwemamiriro ekunze pasina majekiseni anodiwa uye kupihwa mavisa kusvika.
Kudzivirirwa kwakakosha nevevashandi vekushanya uye zvivakwa zviri kuita kudzidziswa kwakasimba uye chitupa kuti ive COVID-yakachengeteka uye huwandu hwevanhu hunodadisa imwe yepamusoro yekupinda majekiseni epasi pasi.
Yakakomberedzwa nemaruva akasarudzika nemhuka uye nharaunda yekugara yaunosarudza kubva, zviwi zveSeychelles zvinogadzira nharaunda yakakwana yekusanganisa bhizinesi uye mafaro. Dzimba dzinoverengeka dzekuzorora dzakaongororwa uye dzakasimbiswa kuti dzakakodzera zvinangwa zve'basa, 'kubva kumahotera anoyevedza, mafurati akanaka, nzvimbo dzekutandarira uye dzimba dzevaeni chaidzo dzinogona kuwana dhijitari nemabasa emahotera pamwe nekufamba kunoenderana nebhizinesi. Chero chero kuravira kwako kana bhajeti, iwe unogona kubatsirwa kubva kwezvivakwa zvemazuva ano, zvinowanikwapo uye sarudzo huru dzevaraidzo mune imwechete yakasarudzika mamiriro.
Ita kushanya kwako kunotevera kuSychelles chiitiko chebasa! Kunyangwe iwe uri wega mufambi, vaviri kana mhuri, zviwi zvedu zvinokukoka iwe kuti ufadze chishuwo chako chekufamba usinga regedze basa rako.
Tsvaga kuti ungaita sei Seychelles yako yekushandira kuenda kwairi https://workcation.seychelles.travel/
Iyo Bahamas, iyo Heartbeat yeKushanya Inopemberera Nyika ...